Maxey xukuumadu qabatay todobaadkii tegay? * Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
By A warsame	 Last updated Sep 13, 2014
WAR-SAXAAFADEED: Mogadishu, 13 September 2014 – Wasiirka Warfaafinta Mudane Mustafa Sheikh Ali Dhuhulow oo maanta Muqdisho kula hadlayey warbaahinta ayaa siiyey warbixinta horumarka Dowladda ee usbuucii la soo dhaafay. Wasiirka ayaa ka hadlay arrimo ay ka mid yihiin; Muhiimada La-Tashiga & Dhageysiga Dadweynaha, Wadatashiga ka socda Baydhabo, Wacyigelinta Bulshada, Arrimaha Abaaraha Dalka, Horumarka Waxbarashada Dalka, Horumarka Xaquuqul Insaanka, Horumarka Xasilinta Dalka iyo Olalaha Nadaafada Gobolka Banadir.
Wasiirka Warfaafinta ayaa hadalkiisa ku bilaabay Muhiiimadda La-Tashiga iyo dhageysiga bulshada waxuna yiri “11kii September 2014 Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamud ayaa ka qeybgalay barnaamij uu shacabka si toos ah ula hadlayey isla markaana uga jawaabayey su’aalahooda. Kulankan ayaa ahaa mid looga dan lahaa in lagu qiimeeyo labadii sano ee Dowladda Federaalka ee Rasmiga ah ay jirtey. Madaxweynaha ayaa warbixin kooban siiyey shacabka oo ku aadan horumarka ballaaran ee laga sameeyey dhinacyada amniga, is-gaarista gobolada, dib u heshiisiinta, dhaqangelinta nidaamka federaalka, dib u habeynta Garsoorka, Dib u eegista Dastuurka iyo maamulka Maaliyadda. Madaxweynahu waxuu sheegey in wax badan qabsoomeen, iyadoo ay jireen caqabado fara badan, inta harteyna la dhameystiri doono. Madaxweynaha ayaa u ballanqaaday shacabka in tallooyinkooda muhiimka ah la dhageysanayo laguna camal falayo. Madaxweynaha ayaa sheegay in danta guud ay tahay in dalkan la gaarsiiyo marxalad nabad ah oo muwaadiniinta Soomaaliyeed ay si xor ah ay aayahooda uga tashan karaan.”
Wasiirka Warfaafinta oo ka hadlayey Wadatashiga ka socda Baydhabo ayaa yiri “Gudoomiyaha Golaha Shacabka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari ayaa weli ku sugan Baydhabo oo uu wadaa wadatashiyo uu la yeelanayey dhammaan qeybaha kala duwan ee bulshada. Guddoomiyaha ayaa 11kii September 2014 ku dhawaaqay Shir dib u heshiisiineed oo maalinta Axadda ah ee 14ka September u furmi doona shacabka deegaanada Koonfur Galbeed. Ujeedada shirkan dib u heshiisiinta ayaa ah in dadka deegaanka la dhexdhigo nabad oo la is cafiyo si ay u sahlanaato in xal loo helo dhammaan fikradaha kala duwan ee hadda jira oo ay shacabku fursad u helaan ay aayahooda uga tashadaan. Guddoomiyaha ayaa kulan uu la qaatay bulshada Baydhabo ugu baaqay inay muhiim tahay in danta guud loo wada istaago isla markaana dadka deegaannadan ay ku midoobaan oo ay sameystaan maamul ka tarjumi kara maslaxadda shacabka deegaanka iyo tan Dalka Soomaaliya. Ergeyga Gaarka ah ee XG ee QM Nicholas Kay ayaa 8dii September booqday Baydhabo si uu u dhiiri geliyo dadaalada wadatashiga socda isla markaana uu u xaqiijiyo dadka deegaanka taageerada QM iyo beesha caalamka ee ku aadan maamul u sameynta Koofur Galbeed.”
Wasiirka Warfaafinta oo ka hadlayey muhiimadda wacyigelinta bulshada ayaa yiri “Shacabka Soomaaliyeed wey ka soo daaleen dhibaatooyin oo maanta waxey u baahanyihiin nabadeyn iyo in khilaafaadka jira lagu xaliyo si nabad iyo is-afgarad ah. 9kii September 2014 Majmaca Culumada Soomaaliyeed ayaa qabtay kulan looga hadlayey muhiimadda amniga iyo xalinta khilaafaadka oo ayna ka soo qeybgaleen culimaa’udiin, waxgarad, aqoonyahanno iyo abwaanno Soomaaliyeed, iyo bulshada rayidka ah. Hal ku dhigga kulanka oo ahaa “Nabaddu waa furaha nolosha” oo la isla gartay muhiimadda gaarka ah oo uu amnigu u leeyahay nolosha bani’aadanka. Abwaan Maxamuud Cabdullaahi Ciise “Sangub” ayaa kulanka ka jeediyay gabay guubaabo ah oo ka hadlayay muhiimadda nabadgelyada iyo sidii meel la isaga dhigi lahaa Khilaafka. Waxaana dooda lagu soo qaaday sidii bulshada ay u noqon laheyd mid ka fog khilaaf iyo collaado oo loo baahanyahay in lala yimaado tanaasul iyo is-afgarad si loo xoojiyo nabadeynta dalka. Guddoomiyaha Guddiga Majmaca Culimada Soomaaliyeed Sheekh Yuusuf Cali Ceynte ayaa sheegay in loo baahanyahay in laga wada shaqeeyo amniga iyo xasiloonida oo ay diinta Islaamku fareyso. Culumada ayaa ku baaqday in dagaalada bulshada dhexdeeda ah la joojiyo oo dhiig la daadiyaa waa danbi kan ugu weyn. Dowladda Federaalka wey ka go’antahay sidii loo joogteyn lahaa wacyigelinta bulshada oo muhiim u ah nabadeynta dalka.”
Wasiirka Warfaafinta oo ka hadlayey arrimaha Abaaraha ayaa yiri “11kii September 2014 Dowladda Federaalka ayaa u dirtey degmada Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan 8 kolonyo gaadiid ah oo sida raashin gargaar ah. Wasiirka arrimaha gudaha Mudane C/llaahi Goodax Barre iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa la filayaa iney gaaraan degmada Jalalaqsi, si ay goob joog uga noqdaan qeybinta raashinkaasi, islamarkaana kulamo ula qaataan maamulka iyo bulshada ku nool degmadaasi. Degmada Jalalaqsi ayaa ka mid ah deegaannadii ugu dambeeyay ee malleeshiyaadka Al-Shabaab laga xorreeyey. Dowladda Federaalku waxey uga mahadcelineysaa Dowladda Australia ballanqaadkeedii 10kii September ee ahaa in 5 milyan oo dolar ay Soomaaliya ugu talogasho dhanka gar-gaarka bani’aadanimo. Wasiirka Arrimaha Dibedda ee Australia Julie Bishop MP ayaa soo saartay qoraal ay ku sheegeysey in 5ta million oo dollarka Mareykanka ah ay Australia ugu talo gashay arrimaha raashin deg-deg ah, biyo, nadaafadda, hoy iyo kaalmo caafimaad iyadoo kaalmadaas soo marsiineysa hay’adaha QM.”
Wasiirka Warfaafinta oo ka hadlayey horumarka waxbarashada Dalka ayaa yiri “9kii September 2014 waxey dowladdu qiimeyn ku sameysay Mashruuca Aada Dugsiyada oo sannad jirsaday. Wasaaradda Waxbarashada iyo UNICEF oo iska kaashanaya mashruucan ayaa ilaa hadda waxaa sanadkii la soo dhaafay u qabsoomay inay waxbarasho Iskuul ah bilaabaan dad gaaraya 60,000 oo arday cusub ah. Sidoo kale wasaaradda waxbarashada waxey howlgelisay 2,000 maclamiin cusub si loo dar-dargeliyo mashruucan oo muddo seddex sano ah gudahood la rajeynayo in carruur gaareysa hal milyan ay ka faa’iideysan doonaan waxbarasho lacag la’aan ah oo dalka laga hirgeliyo. Mashruucan ayaa ujeedadiisu tahay in carruurta Soomaaliyeed ay helaan fursado waxbarasho tanoo kaalin weyn ka qaadan doonta la dagaalanka jahliga, faqriga iyo cudurada. Waddan walbana waxuu horumarkiisu ku xiranyahay heerka waxbarasada dadkiisa. Dowladdu waxey ugu baaqeysaa dhammaan hay’adaha iyo beesha caalamka inay taageeraan qorshahan si carruurta Soomaaliyeed ay u helaan waxbarasho tayeysan.”
Wasiirka Warfaafinta oo ka hadlayey horumarka dhanka Xaquuqul Insaanka ayaa yiri “Wasaaradda Haweenka iyo Xaquuqul Insaanka ayaa usbuucii hore waday wadatashiyo la xiriira sameynta Hindise Sharciyeedka Ka hortagga Fal danbiyeedyada loo geysto dumarka. Hindise Sharciyeedkan ayaa Wasiiradda iyo khubaro Soomaaliyeed ay magaalada Nairobi ku soo gabogabeeyeen nuqulkii koowaad ee Hindise Sharciyeedkan oo la filayo inuu wax weyn ka tari doono horumarka Xaquuqda dumarka Soomaaliyeed. Dowladda Federaalka wey ka go’antahay sidii loo joojin lahaa dhammaan Xad-gudubyada loo geyso muwaadiniinta Soomaaliyeed.”
Wasiirka Warfaafinta oo ka hadlayey horumarka Xasilinta Dalka ayaa yiri “Hay’adaha Amniga ee Dowladda oo beryahanba waday dhaqangelinta qorshaha Xasilinta Dalka ayaa guulo ka gaaray howlgallo laga waday Muqdisho oo looga hortagey falal argagaxisadu la damacsanaayeen shacabka. 9kii September ayuu Taliyaha Ciidanka Booliska Soomaaliya, S/Guuto Maxamed Sheekh Xasan Ismaaciil, warbaahinta u sheegay in Booliska ay qaadeen tallaabooyin lagu wiiqayo haraadiga kooxda Al-Shabaab ee ku dhuumaalaysanaya degmooyin ka tirsan Gobolka Benaadir. Labadii bilood oo la soo dhaafay waxaa Muqdisho ka dhacay 23 dil oo 18 kamid ah kooxihii ka danbeeyay lasoo qabtay, waxana sidoo kale la fashiliyay 11 howlgal oo kooxaha nabad-diidku doonayeen inay ku waxyeelaan Ummada Soomaaliyeed. Dowladda Federaalka ayaa wada qorshe hay’adaha amniga looga howlgelinayo dhammaan deegaanada laga xorreeyey Al-Shabaab si loo sugo amniga deegaanadaas isla markaasna loo gaarsiiyo adeegyada bulshada. Hay’adaha Amniga iyo AMISOM ayaa si wanaagsan isaga kaashada la dagaalanka kooxaha nabad-diidka ah iyo dhaqangelinta Qorshaha Xasilinta Dalka.”
Wasiirka Warfaafinta oo ugu danbeyntii ka hadlayey Olalaha Nadaafadda Gobolka Banadir ayaa yiri “Maamulka Gobolka Banadir oo beryahanba waday Olalaha Nadaafadda caasimadda oo bilicdii dib loogu soo celinayo ayaa 10kii September 2014 Maamulada Degmooyinka Hodan iyo Wadajir ay si wada jir ah Olole Nadaafadeed uga bilaabeen Wadada Laamiga ah ee ka baxda Isgoyska Benaadir ee tagta ilaa iyo dhanka Ex-koontarool Afgooye. Ololahan ayaa shacabku si mutadawac ah uga qeybqaadanayeen iyadoo ujeedadu aheyd in dib loo soo celiyo bilicdii caasimada dalka ee Muqdisho iyo tii Gobolka Banadir, isla markaana bulshada loogu horseedi lahaa ka wada shaqeynta danta guud bacdamaa waddadu ay tahay mid halbowle u ah isu socodka shacabka iyo kobcinta ganacsiga dalka. Dowladda Federaalku waxey ku dhiiri gelineysaa maamulka Gobolka iyo shacabkaba inay muhiim tahay in adeegyada bulshada la soo celiyo bacdamaa uu dalku cagaha saaray waddadii soo kabashada iyo horumarka.”
Sarkaal ka tirsan Nabad Sugidda oo lagu dilay goob ku bdan yihiin ciidamada Soomaaliya